Paco Roca. "Ndiri kupedzisa nyowani nyowani: Dzokera kuEdeni." | Zvazvino Zvinyorwa
Paco Roca. "Ndiri kupedzisa nyowani nyowani: Dzokera kuEdeni."
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Hurukuro, Noticias
Mufananidzo: Webhusaiti yaPaco Roca.
paco rock (Valencia, 1969) ndeimwe yevatambi vedu ve comic uye yakajeka graph vazhinji vakatevera, vane mukurumbira uye vekunze. Yake yakajeka mifananidzo Makwinya Iyo yakaiisa pamusoro peiyo genre yakasarudzika uye, panguva imwechete, dzakasiyana uye ipapo inoenderera. Y yekupedzisira july 25 akahwina imwe yemukurumbira Eisner Mipiro kubudikidza Iyo imba, basa repamoyo uye repamoyo rakatsaurirwa kuna baba vake.
Zvave zviri mufaro kuti makandipa izvi bvunzurudzo yandinokoshesa zvikuru, Yako yakatsaurirwa nguva uye mutsa weboka rako rekutaurirana. Mariri anotiudza nezve rake pesvedzero, chekutanga ndangariro uye a chirongwa chitsva iyo ichaburitswa munaNovember: Back to eden.
Kubvunzana naPaco Roca
NHAU DZEMITAMBO: Unoyeuka here icho chifananidzo chekutanga chawakaona kana kufungidzira uye chakakufuridzira kuti utore?
PACO ROCK: Chokwadi kwaive nekumwe kwekutanga, vignettes e Mortadelo uye Filemon, ivo Asterix… Asi Nyeredzi Hondo chingave chimwe chezvinhu izvo zvakandikurudzira chaizvo chaiko. Pandakangopedza kumuona, ndakada rimutsiridze, uye nzira yandaifanira kuzviita nayo dhonza yangu comic nezve firimu. Iyo nzira yekurarama nguva chakakosha chii inoramba ichinditora kuti ndiite zvidhoma.
AL: Nderipi basa kana munyori akakukanganisa zvakanyanya uye nei uchivasimbisa?
PR: Pachave nemabasa mazhinji uye vanyori vakandibata. Munguva dzese dzehupenyu iwe unowana mabasa anokukurudzira. Yeyekutanga angave maalbhamu e Tintin uye iyo yakanatswa chaizvo dhizaini yaHergé. paranecks, de Carlos GimenezIzvo zvakandibatawo pane imwe nguva muhupenyu hwangu. Kusvikira panguva iyoyo enyambo dzandaive ndaverenga dzaive dzezvinyorwa zvengano, vafambi uye magamba Uye kamwe kamwe ndakatarisana nenyaya yakapusa, yevana mumusha wenherera. Epic yemanzwiro.
AL: Nderipi bhuku remakomiki kana graphic novel hunhu iwe waungafarire kusangana kana kugadzira?
PR: Kuna Captain Haddock. Ini ndaimuda kugunun'una kwake, kugadzirira kwake kuita whiskey, uye duramazwi rake rakapfuma kana zvasvika pakupika.
AL: Chero zvivaraidzo kana zvasvika pakudhirowa?
PR: Handina zvakawanda zvekuvaraidza. Pamwe uine mumhanzi wepamberi. Ndinozviona zvakaoma kudhirowa ndakanyarara.
PR: Kunyangwe ini ndichifarira kukwevera mukati kudzidza kwangu nemwenje wakanaka uye nyaradzo, kudhirowa zvakare patafura yekudyira, mu hotera, muchitima ... uye Ndinosarudza mangwanani masikati.
AL: Chii chauchiri nechikwereti nacho Makwinya?
PR: Zvese zvandinazvo. Makwinya Yakandiisa pamepu uye inoramba ichindipa mufaro pese painoburitswa mune imwe nyika kana imwe. Kubva pakaburitswa hupenyu hwangu hwashanduka, ndakakwanisa kurarama kubva mumakomiki uye, zvirinani kana zvakaipa, handina kana vhiki rekudzikama kubva ipapo.
AL: In Yechando yekatuni iwe unoshanyira wengano Bruguera yekutsikisa imba uye akakosha mazita muSpanish comics. Unogona here kuchengeta yakakosha?
PR: Na Escobar. Kunyangwe kuseka kwake dzimwe nguva kwaisada, ini ndaigara ndichida nzira yavo yekudhirowa. Uye zvakanyanya zvandinoziva nezve Escobar, zvakanyanya pandakamuyemura semunhu uye semuenzi asingazorore anokwanisa kunyora, kudhirowa kana kugadzira michina isinganzwisisike.
AL: Mhando dzako dzaunofarira mukati meiyo graphic novel?
PR: Ini ndinoda nhoroondo, iyo biography, asi pamusoro pezvose nyaya dzine vatambi vane simba zvinondifadza.
AL: Chero mapurojekiti matsva ari kuona?
PR: Ehe, ndiri kupedzisa komiki nyowani yekuti kana zvese zvikafamba zvakanaka ichabuda munaNovember. Achadaidzwa Back to eden uye ndezvemufananidzo, iyo chete amai vangu vaive naamai vake.
AL: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa ndechei, kunyanya icho chemakomiki uye mifananidzo yakajeka, kune vakawanda vanyori sezvavari kana ivo vanoda kutanga kutsikisa?
PR: Kurarama kubva mutsika kwakaoma mune chero kurairwa. Kugona kurarama kubva pane zvinyorwa, mabhuku kana ma comic aunotengesa hazvisi nyore. Asi iyo comic bhuku svikiro ndeimwe yeasununguko aripo, iwe unogona kutaurira zvaunoda pasina chero muganho. Uye kunyangwe musika wedu uri mudiki, ndinotenda iyo yakapihwa nguva yakafararira munyika ino inoonekwa yatiri kurarama. Handikwanise kufunga nezvebasa riri nani.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kurarama yakaoma kwauri here kana iwe uchave unokwanisa kuchengeta chimwe chinhu chakanakira ramangwana mabasa?
PR: Kunyange hazvo mamwe mabasa akadai sevanyori vemifananidzo achishandiswa kusurukirwa nekuvharirwa, kusungwa uku kwatibata tese. Asi mukati memutambo kuti iyi mamiriro anga ari, Ini ndakakwanisa kutora mukana nazvo.
Ndakaverenga zvakawanda, ndakaona akateedzana anondikurudzira shamwari dzangu uye ini handina kuwana nguva yekuona, ndakagadzirisa tsamba uye ndakakwanisa kushanda pasina zvinokanganisa nzendo dzangu dzairamba dzichienderera. Kumira uku kunofanirwa kushandira isu kuratidza nezve zvatakada nezvatisingafarire nezvehupenyu hwatakararama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Paco Roca. "Ndiri kupedzisa nyowani nyowani: Dzokera kuEdeni."